Insider anoti Taylor Swift 'akaparadzanisa' aimbova BFF Karlie Kloss pamusoro pe 'chimwe chinhu chinopenga' - Nhau
Kuru Nhau Style Blog Macelebs
Insider anoti Taylor Swift 'akaparadzanisa' aimbova BFF Karlie Kloss pamusoro pe 'chimwe chinhu chinopenga'
Karlie Kloss anga asingaonekwe asipo kubva Taylor Swift '' Chikwata chevanhu vane mukurumbira pari sevanonoka nevari mukati vanozopedzisira vopa nzwisiso yechikonzero chekukonana kwavo.
'Taylor akatsamwa pamusoro pechinhu chinopenga uye akabva angoparadzanisa Karlie,' akadaro munhu Peji Rechitanhatu neMugovera, Nyamavhuvhu 10.
Runyerekupe rwakaitika nguva pfupi yadarika kuti Karlie akakoka boka revamwe shamwari kuna Taylor's $ 47.7 miriyoni Tribeca pad, kwaanonzi aitova nekamuri yake yekurara. Asi Taylor anonzi akatsamwa kuti akashandisa rupo rwake uye haana kukumbira mvumo asati aunza bevy yevaenzi.
Vamiriri venyeredzi mbiri idzi varamba kuti kusataurirana kwaive huswa chaihwo hwakatyora musana wengamera, asi sosi inoti nyama yavo yenyuchi yakatanga pamusoro pechigamba chakabuda paruoko.
Mumwe akapinda akawedzera kuti, 'Anogara achiita chinhu chimwe chete ichi: anodonha paanoenda kupfuura zvaaida.'
Vaimbove maBFF havana kuonekwa pamwe chete kubvira Karlie paakaenda kune rimwe remazuva ekonzati yaTaylor's Reputation Tour muNashville gore rakapfuura.
`` Hapana anoisa show se @taylorswift, '' Karlie akafananidza pikicha neiye 'Unofanira Kudzikama' muimbi wenziyo pa Instagram. 'Nashville anga abuda munyika ino, ndinodada nemi.'
Hapana anoisa pashoo yakaita @taylorswift #ReputationTour Nashville anga ari kunze kwenyika ino, NDINODADA newe
Chinyorwa chakagovaniswa na Karlie Kloss (@karliekloss) musi waAug 26, 2018 pa1: 12 pm PDT
Taylor anonzi zvakare akaramba kukoka kumuchato waKarlie kuna Josh Kushner muna Gumiguru wegore rapfuura.
Kuwedzera kutuka mukukuvara, basa raKarlie rekufananidzira rinotarisirwa naScooter Braun, uyo Taylor achangobva kuve naye kuputika kwevanhu pamwe nepamusoro pekodzero dzake dzichangotengwa kune yake yekare mimhanzi katalog
Taylor akadana Scooter 'anodheerera' mushure mekunge asaina madhora mazana matatu emamirioni neyaimbove zita rake, Big Machine, muna Chikumi.
Asi Karlie anga ave padhuze-padyo nemumhanzi mogul kunyangwe bhizimusi rake dhizaini naTaylor. Muchokwadi, iye nemurume wake vakangozorora neScooter nemukadzi wake, Yael, muMediterranean.
'Vhiki rekuseka,' Scooter akanyora mufananidzo weboka vari muchikepe naKarlie pa Instagram muna Nyamavhuvhu 10.
Chinyorwa chakagovaniswa na Scooter shava (@scooterbraun) pana Aug 10, 2019 pa7: 27 am PDT
Taylor, anga ariko kudanana muchivande 'Anodiwa' mutambi Joe Alwyn kubvira 2016, ari kuramba akabatikana zvakakwana pasina Karlie mazuva ano. Yake yechinomwe studio album, 'Anoda,' yakagadzirirwa kuzoburitswa muna Nyamavhuvhu 23.
Judith Chiedza anonongedza kuti 'Ndiani Bhosi' reboot inogona kuitika
Angela Simmons matombo ebikini 3 mwedzi mushure mekuzvara
Zita raKevin Hunter rakabviswa kubva kuna Wendy Williams 'show credits
Candace Cameron Bure pane chikonzero nei asingazodzokere ku 'The View'
Ex murazvo Ben Affleck naJ.Lo vachiri kugara vachikurukura
hupenyu hwepati kuratidzwa
kelly live ratings kubva michael aenda
tarek el moussa uye alyssa logan
ewan mcgregor naMary elizabeth